Umaka: 2015 | Martech Zone
Isifinyezo seKenshoo Paid Digital Marketing: Q4 2015
NgoLwesithathu, Februwari 17, 2016 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 16, i-2016 Douglas Karr
Njalo ngonyaka ngikholelwa ukuthi izinto zizoqala ukuhleleka, kepha unyaka nonyaka imakethe iguquka kakhulu - futhi no-2015 bekungehlukile. Ukukhula kweselula, ukukhuphuka kwezikhangiso ezisohlwini lomkhiqizo, ukuvela kwezinhlobo zezikhangiso ezintsha konke kube nomthelela kuzinguquko ezithile ezibalulekile ekuziphatheni kwabathengi nasenkampanini ehlobene nabathengisi. Le infographic entsha evela eKenshoo iveza ukuthi ezomphakathi zikhule kakhulu ezimakethe. Abakhangisi bandisa imali abayisebenzisela umphakathi ngo-50%
Izindlela zokuthatha ezi-3 zesikhathi seholide sika-2015 ukukusiza ngo-2016
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 9, i-2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
AbakwaSplender bahlaziye ukuthengiselana okungaphezu kwezigidi ezine kumasayithi angama-800 + ukuze babone ukuthi ukuthenga ku-inthanethi ngo-2015 kuqhathaniswa kanjani nonyaka ka-2014. Usuku Lokubonga bekuwusuku lwesithathu oluphakeme kakhulu lokuthenga ku-inthanethi lwesizini ngamakhompyutha nezinto zikagesi ezihamba phambili ngezipho kodwa izembatho nezesekeli zihamba phambili ukukhula. ICyber ​​ngoMsombuluko kusewusuku olukhulu kunazo zonke lokuthenga ngamaholide online, lapho kuthengiswa khona ngamaholide okungu-6%. Kodwa-ke, ukuthengisa bekuphansi ngo-14% kusukela ngo-2014. Ngombono wami, lapho
Hawu, unyaka onjani lona! Abantu abaningi bangabheka izibalo zethu bese bephendula nge-meh… kepha besingeke sijabule ngenqubekela phambili eyenziwe yisayithi ngonyaka odlule. Ukuhlelwa kabusha, ukunakekelwa okwandisiwe kwekhwalithi kokuthunyelwe, isikhathi esichithwa ocwaningweni, konke kukhokha kakhulu. Sikwenze konke ngaphandle kokunyusa isabelomali sethu futhi ngaphandle kokuthenga noma iyiphi ithrafikhi… konke lokhu kukhula ngokwemvelo! Ukweqa izikhathi ezivela emithonjeni yogaxekile yokudlulisa, nayi
Cinga Ukusetshenziswa Kokukhangisa kwe-Q3 2015 Shows Dramatic Shifts
NgoLwesihlanu, Okthoba 16, 2015 NgoLwesihlanu, Okthoba 16, 2015 Douglas Karr
Amaklayenti akwaKenshoo enza imikhankaso yezentengiso yedijithali esebenza emazweni angaphezu kwe-190 futhi afaka cishe isigamu seFortune 50 kuwo wonke amanethiwekhi ayi-10 aphezulu we-ejensi yezikhangiso. Leyo yidatha eningi - futhi ngiyabonga ukuthi uKenshoo wabelana ngaleyo datha nathi njalo ngekota ukubona imikhuba eshintshayo. Abathengi bathembele kumadivayisi eselula kunanini ngaphambili, futhi abathengisi abaphambili bathembele emikhankasweni ekhula ngokwengeziwe eletha imiphumela emihle kukho kokubili
NgoLwesibili, Okthoba 13, 2015 NgoMgqibelo, ngoMeyi 7, 2016 Douglas Karr
Abaphathi okuyisisekelo bokumaketha kwe-database ukuthi ungakwazi ukuhlaziya futhi uthole amaphuzu eqoqo lamathemba ngokuya ngokufana kwawo namakhasimende akho wangempela. Akusona isisekelo esisha; besisebenzisa idatha emashumini ambalwa eminyaka manje ukwenza lokhu. Noma kunjalo, le nqubo yayinzima. Sisebenzise amathuluzi wokukhipha, wokuguqula nokulayisha (ETL) ukudonsa idatha kusuka emithonjeni eminingi ukwakha insiza eyodwa. Lokho kungathatha amasonto ukukufeza, kanye nokuqhubekayo
Sijabule kakhulu nge-webinar yethu ezayo neMeltwater kokuqukethwe nohambo lwamakhasimende. Kholwa noma ungakukholwa, ukumaketha kokuqukethwe kuye kwaqhubeka nokuqhubeka. Ngakolunye uhlangothi, indlela yokuziphatha yabasebenzisi iguqukele ekutheni okuqukethwe kusetshenziswa kanjani nokuthi okuqukethwe kuluthinta kanjani uhambo lwamakhasimende. Ngakolunye uhlangothi, abasebenzeli baye bavela, amandla okulinganisa impendulo, kanye nokukwazi ukubikezela ukuthandwa kokuqukethwe. Qiniseka ukuthi ubhalisela i-